Abezindaba baseMelika, ekugcineni, bakwazi ukuveza zonke izimfihlo zomongameli waseRussia. Izintatheli zathola izithombe ezindala kusukela ngo-1920 no-1941. Abathelisi beqiniso bayaqiniseka ukuthi uVladimir Putin ufaniswa nezithombe.
Emaphephandabeni aseMelika, izinguquko eziningana zendlela umongameli waseRussia eya ngayo ezithombeni zamantombazane oneminyaka engu-95 ubudala kanye no-74 ubudala asevele evele. Enye yezinkolelo kuthiwa uPutin nguye u-Count of Dracula: lokhu kuyimfihlo yenqubomgomo egcinwe ngaphandle. Enye inkolelo ukuthi u-Putin usebenzisa umshini wesikhathi.
I-tabloid yaseMelika iveza imibono yalabo abecabanga ukuthi uVladimir Putin ungumuntu ongenangqondo ongapheli futhi onamandla onke: bayaqiniseka ukuthi umholi waseRussia uhlala emhlabeni amakhulu, uma kungenjalo izinkulungwane zeminyaka. Ngaphandle kwezithombe, abezindaba base-US abahlinzeki nanoma yibuphi ubufakazi, ngakho-ke okwamanje kusadingeka ukuba uhambisane nombhalo osemthethweni ngokusho kukaVladimir Putin e-Leningrad ngo-Okthoba 7, 1952 ...
Umkami u-Andrei Arshavin wabika ukuthi uYulia Baranovskaya ufihla izingane zomdlali webhola
Isithombe senyana encane ka-Aysa yavusa inhlamba
Lokhu kuyisimo se-fiasco: U-Olga Buzova uhlazekile, akakwazi ukufunda kahle izibalo, ividiyo
Indlela u-Alla Pugacheva alahlekelwe ngayo isisindo: isithombe, ukudla, zokupheka zenkampani
I-Timati iholele abalandeli zibe yi-horror, isithombe
U-Tatiana Navka ugxeke ngokukhwabanisa kwentombazane yakhe eneminyaka emibili ubudala
Umklamo wangaphakathi wekamelo lokudlela
I-Beaver Yorkshire Terrier
Ice cream kusuka sitrobheli kanye mascarpone
Amabhasikithi anezikhumba zamathambo
Inhlanzi e-puree yemifino
U-Keti Topuria no-Alexey Dolmatov (i-Guf): ukuhlubuka noma ubungane
Indlela yokuhlanza kahle izindlebe zezinja
Ukugcoba ngama-cheese kanye ne-izaqathe
Ikhekhe le-Snack Pancake
Ukuphulukisa izilonda zempilo